Hydroxy Propyl methyl cellulose, Ethyl cellulose, HEC qeybiye - Chem Honest
diiradda Honest on cilmi baarista codsiga ah ee kala duwan celluloses ka badan 15 sano. Waxaan ku siin dhakhso iyo aqoonta khabiir waxtarka kuu.
Daacadnimo si dhakhso ah, Iskaashiga Karti
tayo sare leh wax cayriin, kuwaas oo qiimo aad u fiican in qiimaha iyo waxqabadka shuruudaha iyo taageertaa kulanka shuruudaha aad HPMC HEC EC CMC RDP
Aqoonta Expert, daawooyinka cusub, Daalacanayo cusub
Qaar ka mid ah xoogga Pages Web ayaa hoos lagu muujiyey
Diiradda Honest on cilmi baarista codsiga ah ee celluloses ka badan 15 alaabta years.Our si weyn loo isticmaali in noocyo kala duwan oo codsiyo warshadaha sida adhesives, galalka, qalabka extrusion, plasticizers, colloids ilaaliya, modifiers rheology, wakiilada xasilinta, thickeners iyo wakiilada biyo-haynta.
Iska tuuri kara Ilaalinta Biyo-La'aanta ee Biyaha-La'aan
Methyl Cellulose Loogu talagalay hilibka ku saleysan Dhirta
Waa maxay hilib ku saleysan dhirta? Hilibka dhir laga sameeyay waa hilib laga sameeyay dhir. Waxaa si gaar ah loogu talagalay oo loo abuuray inay u ekaato, dhadhamiso, oo u karinto sida hilibka caadiga ah. Hilibka dhir ku dhisan ayaa noqon kara qaab burger ...